आइतबार पनि छापावाला सुनको भाउ तोलामा दुई सय रुपैयाँले घटेर ९४ हजार सात सय रुपैयाँमा कारोबार आज नेपाली बजारमा सुनचाँदीकोको स्थिर रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज छापावाल सुन प्रति तोला ९४ हजार ७०० रुपैयाँमा कारोबार भैरहेको छ । आइतबार पनि छापावाला सुनको भाउ तोलामा दुई सय रुपैयाँले.....
सुनकाे मुल्यकाे भर हुदैन् भने जस्तै भयाे । कहिले बढ्छ, कहिले घट्छ थाहा हुदैन् । मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। सोमबार तोलामा ४ सय रुपैयाले बढेको सुनको मूल्य आज तोलामा ६ सय रुपैयाँले बढेको हो । सोमबार प्रतितोला ९६ हजार ९ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज तोलामा ६ सय रुपैयाले.....
सुजुकीले नेपालमा ल्यायो सस्तोमा पावरफुल ‘जिक्सर २५०’ बाइक, यस्तो छ मूल्य
ल न्यू डिजिटल कन्सोलमा, डिजिटल स्पीडो मिटर, टेकोमिटर, गियर इन्डिकेटर, फ्यूल वार्निग, फ्यूल गज जस्ता फिचरले मोटरसाइकल निकै लोडेड रहेको छ भीजी सुजुकीले नेपाली बाजरमा जिक्सर २५० एसएफ र नेकेड दुई मोडल नेपालमा ल्याएको छ । सुजुकी जिक्सर १५० भन्दा बढी पावर चाहानेको लागी यो मोडल निक्कै उपयोगी हुनेछ । २४९ सीसी.....
पाेखरा ११ साउन- अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिका वार्ड -५ बाँगी मा धुवाँ रहित सुधारीएको चुलो कार्यक्रम सुरु भएको छ । कार्यक्रमले मालारानीका अधिकांस घर सफा , वातावरण सन्तुलन र दाउराको बचत भएको छ । अर्घाखाँचीमा “स्वस्थ चुलो नेपाल” नामक गैरसरकारी संस्थाले दाता डिअाइ अाेफिनमाचर इ. भि. जर्मनी को आर्थिक सहयोगमा.....
बैङ्कबाट ऋण लिएर घरजग्गा र गाडी किन्न चाहानुहुन्छ ? यस्तो छ बैङ्कहरूले लिने ऋणको ब्याजदर
बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आम मानिसको घर बनाउने र गाडी चढ्ने सपनालाई साकार पार्दै आएका छन् । बढ्दो सहरीकरण र आधुनिकीकरण पछ्याउने धेरै जसोलाई एउटा राम्रो घर र गाडी होस भन्ने चाहना हुन्छ । तर आफ्नो कमाइ लगाउन खानमै खर्च हुने भएकाले धेरै बचत गर्न नसक्ने अवस्था हुन्छ । यस्तो अवस्थालाई बैङ्कहरूबाट ऋण लिएर मासिक.....
नेपाल र मौरिससबीच श्रम समझदारीमा हस्ताक्षर: निशुल्क जान पाईने
नेपाल र अफ्रिकी मुलुक मौरिससबीच सोमबार जेनेभामा द्विपक्षीय श्रम समझदारी भएको छ । श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट र समकक्षी सुदेश एस क्यालिचनबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । दुवै जना अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) को शतवाषिर्कीमा सहभागी हुन जेनेभा पुगेको मौकामा समझदारी गरिएको हो । विष्टका अनुसार मौरिसससँग.....
अब विदेशबाट आउने किताब र पत्रिकामा १० प्रतिशत कर
सरकारले पत्रिका र किताबमा भन्सार शुल्क लगाएको छ। विदेशमा छापिएर आउने त्यस्ता किताब, पत्रिका तथा ब्रोसरमा अब १० प्रतिशत भन्सार शुल्क लाग्नेछ। आगामी वर्षको बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकमार्फत् अर्थ मन्त्रालयले त्यस्ता सामग्रीमा भन्सार लगाउने व्यवस्था गरेको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले विदेशबाट आउने.....
७५ वर्षमा युवा जोसः कृषिबाटै वार्षिक १५ लाख
मेहनत, जोसजाँगर भए पैसा कमाउन उमेरले रोक्दैन। इच्छाशक्ति भने हुनुपर्छ। ३०÷४० हजार रुपैयाँ कमाउन विदेशी भूमिमा पुग्ने युवाका लागि यहाँका एक ७५ वर्षीय वृद्ध उदाहरण बनेका छन्। पत्यार नलाग्न सक्छ ७५ वर्षीय वृद्धले खेती गरेरै वार्षिक १५ लाख कमाउँछन् भन्ने ! त्यसमा पनि झन् एउटा खुट्टाले त्यति भर पाउँदैन, लौरो.....
कुनैपनि व्यक्ति पैसा कमाएर होइन, बचत गरेर धनी हुन्छ । किनभने जति कमायो उति खर्च गर्ने मानिस कहिल्यै पनि धनी हुन सक्दैन । तर, आफ्नो कमाईबाट बचत गर्दै थप लगानी गर्दै अघि बढ्ने मान्छे अवश्य धनी हुन्छ । धनी बन्न त्यति सजिलो छैन । मान्छे न कमाएर मात्रै धनी हुन्छ, न त बचत गरेर मात्रै । प्रत्येक समय उपयुक्त निर्णय.....
नेपालमा बन्ने भो संसारकै लामो केवलकार
नेपालमा विश्वकै सबैभन्दा लामो दुरीको केवल कार बन्ने भएको छ । कास्कीको बिरेठाँटीदेखी धार्मिक एवं पर्यटकीय स्थल मुक्तिनाथ धामसम्म बन्ने केवलकार विश्वकै सबैभन्दा लामो दुरीको केवल कार हुने दाबी निर्माण कम्पनीको छ । कास्कीको वीरेठाँटीदेखि मुस्ताङको मुक्तिनाथसम्म झण्र्डै ८४ किलोमिटर लामो यात्रुवहाक केवलकार.....